Wmv Joiner: Sida loo soo biir wmv Files
> Resource > Beddelaan > Sida loo soo biir wmv Files
"Waxaan leeyahay dhowr files .wmv (windows media) Koox ka qaaday camera. Mid kasta oo ku saabsan tahay 3-4 daqiiqo. Suuragal u tahay inuu ku biiro kooxda oo dhan files ku galay mid ka mid file dheer sidaa darteed waxaan ku shuban kartaa file hal, halkii ay dhowr ah kuwa horraysiinta "? - Denny
Sida Denny, haddii aad leedahay qaar ka mid ah files wmv in ay yihiin kala oo aad rabto inaad iyaga wada geeyo galay mid ka mid ah oo waaweyn, aad ku biiri karto files wmv. Dhab ahaantii, ma ahan shaqo adag, ilaa inta aad adigu leedahay joiner ah wmv awood badan. Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor) ( Wondershare Filmroa u Mac (Originally Wondershare Filmroa u Mac (Originally Wondershare Video Editor for Mac)) ) waxa uu noqon karaa doorashada ugu fiican ee aad. App Tani waxay sahlaysaa in la sii dayn aad ku biiri dhowr clips wmv habsami galay wmv movie dhamaystiran ama video. Ka dib markii in, aad ku raaxaysan kara waxa ku qoran digital iyada oo aan la kala gooyey.
Hage hoose wuxuu muujinayaa sida inuu ku biiro files wmv arrintan joiner wmv cajiib ah si faahfaahsan. Si aad u hesho oo aad bilowday, waxaad u baahan tahay inaad kala soo baxdo oo hore loo soo dajiyo this joiner file wmv.
Talaabada 1: files Import wmv in joiner wmv this
Guji "Import" doorasho si dajiyaan files wmv kombiyuutar si ay album User ee. Sidoo kale, waxaad soo jiidi kartaa oo hoos u doonayay files wmv aad ka disk adag tahay in la album ah. Isla markiiba, aad dareento karo daray files wmv ayaa lagu qoran album ah. Ama waxaad jiidi karaan jeedi videos in ay album si toos ah.
Tallaabo 2: Ku biir clips wmv
Jiid faylasha wmv laga keeno ka album in ay Timeline ee isku xigxiga. Hubi in ay diyaarin si sax ah. Haddii aad u baahan tahay si dib-u-diyaarin, waxaad iyaga jiidi karaan doono. Laakiin ma jiidi mid file in kale, kuwaas oo kala qeybin doonaa dambe. Si lagaaga caawiyo inaad si fiican u diyaarin dhammaan faylasha wmv aan is dul saaran, waxaad la dhaqaajin karin bar slider ah (ee soo socota si ay u abuuraan button) Mozilla ama Mozilla baxay files oo ka dibna u diyaarin mid mid.
Talaabada 3: dhoofinta dhamaystiran wmv video
Riix badhanka la abuuro, ku dhacay "Qaabka" tab ee suuqa kala dhisayaa-up wax soo saarka, dooro "Wmv" qaab wax soo saarka ama wax kasta oo ah qaabab kale haddii aad rabto. Ugu dambeyntii, doortaan jidkaa file iyo riix "Abuur" mar kale inay u dhoofiyaan faylka wmv dheer. Ok, hadda, file cusub wmv waxaad ka heli kartaa sida ay jidka soo xulay.
Sida loo Edit Video dhalaalka
Wmv Splitter: Iska yaree wmv in Dhowr qeybaha
Top 8 dhiiran Tutorial Videos on YouTube
3D AVI Converter: Si fudud Abuur 3D AVI Faylal ay la 2D Videos
Sida loo Beddelaan VOB in MPEG ee Mac / Win (Windows 8)